Izindaba zezamabhizinisi. I-Geopois.com - iGeofumadas
Izindaba zezamabhizinisi. Ukulele.com
Mashi, 2021 Cartografia, Ukufundisa CAD / GIS, Geospatial - GIS
Kulolu shicilelo lwesithupha lwe- Umagazini weTwingeo Sivula isigaba esinikezelwe kwezamabhizinisi, kulokhu bekuyithuba likaJavier Gabás Jiménez, uGeofumadas axhumane naye kwezinye izikhathi ukuthola izinsizakalo namathuba anikezwa umphakathi we-GEO.
Ngenxa yokwesekwa nokuqhutshwa ngumphakathi we-GEO, sikwazile ukubhala uhlelo lwethu lwebhizinisi futhi safinyelela esigabeni sokugcina somncintiswano we-ActúaUPM, yize singatholanga mklomelo wemali, saqhubeka namandla ethu.
I-athikili ethi "Izindaba Zezamabhizinisi: Geopois.com" yabhalwa nguJavier uqobo, lapho uphawula ngengxenye yokuqala kwenkampani yakhe waze wahlanganiswa kuGeopois.com. Siyakhumbula ukuthi iGeopois iyiThematic Social Network kwiGeographic Information Technologies (TIG), ama-geographic information systems (GIS), izinhlelo kanye ne-Web Mapping ”.
Sifuna ukusuka kulokho okwenziwa ezinye izinkampani zokuqeqesha, ukuguqula i-geopois.com ibe yindawo yokuxhumana nabantu emkhakheni we-GEO, ikakhulukazi ezinhlelweni ze-geospatial kanye nemitapo yolwazi, enengqikithi ethile kanye nokuxhumana okusondele kakhulu phakathi komphakathi wethu.
Kusukela ngo-2018, uGabás uphawula ngokuthi waqala kanjani ukuthuthukisa umqondo webhulogi "ye-geospatial technologies blog" ngemuva kokuphothula izifundo zakhe zobunjiniyela ku-geomatics kanye ne-topography ePolytechnic University yaseMadrid nokusebenza e-Startups naseMultinationals.
Usayizi wemakethe ye-global geospatial analytics kulindeleke ukuthi ukhule usuka ku- $ 52,6 billion ngo-2020 uye ku- $ 96,3 billion ngo-2025, ngakho-ke isidingo sabachwepheshe be-geospatial sisethwe cishe cishe kabili
Ngokuqeqeshwa okuningana kobuchwepheshe, uJavier wayenezifundo ezi-5 ezamnika iziqu futhi, ngaphezu kwakho konke, ulwazi kubuchwepheshe bokuphathwa kwedatha njengohlelo, i-SQL, i-No SQL, i-Geographic Information Systems (GIS) eyamsiza ukuba abe nesisekelo sokwenza IGeopois.
Esikunikeza abasebenzisi bethu yikhono lokubamba iqhaza ngokwakha okokufundisa ngokusebenzisa imodeli yokuxoshwa kwabantu, ukuthi i-OpenStreetMap isebenza kanjani, ngokwesibonelo. Siyakukhathalela okuqukethwe, futhi siyathanda ukunakekela futhi sinikeze abasebenzisi bethu ukubonakala okuphezulu kanye nokutotosa ababhali bethu futhi sibanikeze iwebhusayithi enobungcweti lapho bengaziveza khona.
Ihlukaniswe yiminyaka, ikhombisa umzamo wawo wonke amalungu eGeopois ukukhulisa le nkampani ehlala ihlinzeka ngamathuba kubo bonke abahlaziyi nalabo abanentshisekelo kwimininingwane ye-geospatial. Iwebhu inikeza ezinye izindlela zokufunda kanye nenethiwekhi yabahlanganyeli abangathintwa ngemisebenzi ethile ehlobene nezwe le-GEO.
Sivale unyaka ngokukhula okucacayo ngokwenani lokuvakashelwa, izifundo ezingaphezu kuka-50 ezikhethekile kubuchwepheshe be-geospatial, umphakathi ochumayo ku-LinkedIn onabalandeli abacishe babe ngu-3000 300 nabathuthukisi abangaphezu kuka-15 be-geospatial ababhaliswe endaweni yethu evela emazweni ayi-XNUMX, kufaka phakathi iSpain , Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estonia, Guatemala, Mexico, Peru, Poland noma Venezuela.
Ngamafuphi, iGeopois ingumqondo othakazelisa kakhulu, uhlanganisa izimo ezingaba khona zalo mongo maqondana nokunikezwa kokuqukethwe, ukusebenzisana namathuba ebhizinisi. Ngesikhathi esihle semvelo ye-geospatial ukuthi usuku nosuku ayiqinisekile cishe cishe kukho konke esikwenzayo ezimpilweni zethu zansuku zonke. Uma ufuna ukwazi okuningi ngale nkampani, ungathola i-athikili ngokwenza chofoza lapha
Ukuphela kwento esele ukuyenza ukukumema ukuthi ufunde lolu hlelo olusha, esilulungiselele lona ngomzwelo omkhulu nothando, sigcizelela ukuthi iTwingeo isesandleni sakho ukuthola izindatshana ezihlobene neGeoengineering zohlobo lwakho olulandelayo, xhumana nathi ama-imeyili editor@geofumadas.com y edit@geoingenieria.com. Ngabe usalindeni ukulanda iTwingeo? Silandele ku LinkedIn ngezibuyekezo ezengeziwe.
Thumela Previous«Langaphambilini KUNGABONIWE: ipulatifomu entsha yokuphathwa kwedatha yendawo
Post Next IMARA.EARTH ukuqala okulinganisa umthelela wezemveloOkulandelayo »